Yekutanga Warp: kamwe-tinya graphic adventure yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Yekutanga Warp poindi-uye-tinya mutambo weaidhi kuti ubatanidze neiyi yakasarudzika 3D nharaunda. Uye zvakare, inosanganisira zvimwe zvinhu zvitsva zvakaunzwa kekutanga mune iyi genre yemavhidhiyo mitambo. Pfungwa yevagadziri vayo yaive chaizvo iyo, kuvandudza kukwezva kutariswa.
Yekutanga Warp ine akasiyana graphic nzvimbo kwauchazonongedzera uye tinya pameso. Parizvino zvese zvinoita kunge zvakajairika, uye kune akawanda emavhidhiyo mitambo yakafanana neiyi, asi ma mechanics anoenda kumberi uye inobvumira nguva kubata, chimwe chinhu chakange chisati chamboonekwa.
Iyo nyaya yeiyi graphic adventure yakavakirwa pane isingazivikanwe mutorwa inonzi Ո Օ Ո uye kuti yakamisikidzwa mugirazi kure nekumba kwake. Nekudaro, kuburikidza nekukunda matambudziko uye nenguva kurwa, iye achaedza kuyambuka nzvimbo kuyedza kudzoka nekuzarura zvimwe zvakavanzika kuseri kwekushaikwa kwake kusingazivikanwe.
Uye zvakare, uyu mutambo wevhidhiyo unosanganisirawo mamwe features zvakakosha:
Iri izita rakachena indie, kune vanoda rudzi urwu rwemhando.
Zvakafanana chaizvo musimba kune 2D poindi-uye-tinya ushingi, asi zvisingaenderane.
Smart rubatsiro system kana ukarasika. Nenzira iyi hauzogara wakanamatira pane imwe nhanho sevamwe.
Inotsigira zvisarudzo kusvika ku8K.
Nyaya yakanyorwa-nyorwa ine zvakawanda zvinosetsa uye zvisinganzwisisike quirks.
Yakasarudzika ambient rwiyo.
Iyo yekushanya inovhara mapuraneti akati wandei akagoverwa muzvikamu zvitanhatu.
Mazhinji akanyatsofungidzirwa zvirahwe zvekuti iwe ugadzirise. Ivo vese vachakuisa pamuedzo, uye hazvizove nyore zvachose ...
Zvinyorwa uye zvinyorwa zvidiki mumitauro mina, kusanganisira Spanish.
Rumwe ruzivo nezve Iyo yekutanga Warp chirongwa - Website
Yekutanga Warp Steam Peji - Online store
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yekutanga Warp: one-tinya mutambo weLinux